keyboard နဲ့တိုင်ပတ်ခြင်း [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Hardware Problems » keyboard နဲ့တိုင်ပတ်ခြင်း [Problem]
1 keyboard နဲ့တိုင်ပတ်ခြင်း [Problem] on 28th January 2010, 4:59 pm
သားသား လက်တော့လေး ကီတွေကပ််နေပါတယ် ..
Space bar က ဘာနှိပ်၂ အော်တိုကို ကပ်နေတာ .. Virus ကြောင့်တော့မဟုတ်တာ သေချာပါတယ် .. ဘာလို ့ဆိုတော့ Antivirus မတင်ထားလို ့ပါ ။ :D
ကလိလဲ ကလိပြီးပြီ ရဘူးဗျ
ခုပြောချင်တာက keyboard ကို အသစ်လဲချင်ပါတယ် ..
လုပ်ရမှာ နည်းနည်းရှိန်နေတယ် .. ပြီးတော့ အဲလက်တော့ရ ဲ့ keyboard ကို ၀ယ်လိုရမရ ..
ဘာညာသာရကာအားလုံး သိချင်ပါတယ် ..
လက်တော့ detail ကို အောက်မှာပေးထားတယ်နော် ..
:find :find :find :find :find :find :find :find :find :find
2 Re: keyboard နဲ့တိုင်ပတ်ခြင်း [Problem] on 28th January 2010, 5:22 pm
infohunter wrote: သားသား လက်တော့လေး ကီတွေကပ််နေပါတယ် ..
Laptop keyboard တွေက တစ်ခုချင်းစီဖြုတ်လဲလို့ရတယ်လို့ပြောတာ ကြားဖူးပါတယ်... ဆိုင်တွေမှာမေးကြည့်လိုက်ပါ... ရဖို့များတယ်... ကျနော် သူများလဲသုံးတာ တစ်ခါမြင်ဖူးထားလို့... ကျနော်ကတော့ laptop မကိုင်နိုင်သေးပါဘူးဗျာ... :cry :cry
3 Re: keyboard နဲ့တိုင်ပတ်ခြင်း [Problem] on 28th January 2010, 6:04 pm
အပိုပစ္စည်းလိုချင်ရင်တော့ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းအလယ်ဘလောက် က ကင်းအင်ပါယာနဲ့ ဖိုက်စတားမှာ တော့ အများကြီးရှိတယ် စျေးလည်း သက်သာတယ် သွားမေးကြည့်လိုက်ပါ
4 Re: keyboard နဲ့တိုင်ပတ်ခြင်း [Problem] on 29th January 2010, 8:32 am
အင်း လဲလို့ ရပါတယ် keyboard တစ်ခုလုံး လည်း လဲ လို့ ရပါတယ် တကယ်လို့ အဆင်မပြေ ရင် ကျွန်တာ် ဆိုင်လေး (၁)ဆိုင် ကို ပြောပြလိုက်ပါမယ် သူက အဲဒီပိုင်းမှာ တော်တော် နာမည်ရ ပါတယ် ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း အလယ် ဘလောက်မှာ ဆိုင်ကတော့ မနည်းရှာ ရမယ်နော်
(5star computer service shop)[b] :destroy :doit :bike :bike
5 Re: keyboard နဲ့တိုင်ပတ်ခြင်း [Problem] on 29th January 2010, 9:01 am
keypad တစ်ခုလုံးလဲချင်ရင် နည်းနည်းတော့ စျေးကြီးလိမ့်မယ်။
ရ၀၀၀၀ိ/-၈၀၀၀၀ိ/ လောက် ကုန်လိမ့်မယ်။
တစ်ခုချင်းစီ လဲရင်တော့ သက်သာလိမ့်မယ်။
:thinkagain :thinkagain :thinkagain :doit :doit :doit :doit
6 Re: keyboard နဲ့တိုင်ပတ်ခြင်း [Problem]